SIDA LOO KEYDIYO DABACASAHA IYO XIDIDADA JIILAALKA EE MIISAANKA GURIGA: MARKAAD QODO DALAGGA, WAXAAD KU RIDI KARTAA MAQSIN IYO MAQSIN, MAXAY TAHAY IN HEERKULKU HALKAAS JOOGI KARO? - KHUDRADDA
Karootada iyo xididdo waxay leeyihiin waqti dheer waxayna si adag u qaateen meelahooda miiska. Iyaga oo aan lahayn, ma suurtageli karto in la qadariyo miiska xafladaha oo caan ah oo caan ah oo hoosta ku jira oo dhar ah, ama maalmo wiig ah oo leh maraq beetroot ama vinaigrette. Qawaaniinta xeerarku waa kala badh uun dagaalka. Qeybta labaad waa in la ilaaliyo wax kasta oo amaan ah iyo dhawaqa ilaa goynta soo socota. Ha ilaawin in khudradda cagaarka oo si habboon loo beeray si fiican loo hayo, kuwaas oo si taxadar leh loo ilaaliyo.
Karootada iyo xididdo ayaa loo yaqaan cagaaran rootiga. Waxay leeyihiin wareeg ah horumar laba sano ah. Sannadka ugu horeeya ee nolosha, dhirta waxay sameeyaan rosette ah caleemaha iyo dalagga xidid qafiif ah, taas oo ah organic iyo nafaqooyin lagu kaydiyo. Dalagyada dalaggu waxay muhiim u yihiin nafaqada waxayna leeyihiin awoodda kaydinta muddada dheer ee xilliga jiilaalka iyo gu'ga iyada oo aan la dhimin qiimaha nafaqada iyo waliba fiitamiin.
Ma la isu dhejin karaa?
Xaaladaha kaydinta ee karootada iyo xididdo badanaa isku mid ah. Waxa lagu kaydin karaa isla miisaanka, balconi isku mid ah (haddii uu yahay mid sir ah), iyo xitaa sanduuq isku mid ah, laakiin kaliya xaalad aan la xiriirin.
DAREEN: Laakiin karootada waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin miraha khudradda ugu caansan ee kaydinta, iyo xididdo ayaa ah kuwa ugu dhimashada badan, sidaa darteed, haddii ay jirto fursaddan oo kale, ka dibna way ka wanaagsan tahay in ay si gooni ah u kaydiso.
Noocyo ku habboon
Noocyada Bisaylkiisa ee xilliga dabiiciga ah waa in loo doortaa kaydinta.. Noocyada ugu wanaagsan ee la hayo iyo Beelaha karootada:
Noocyada xididdo, ku habboon kaydinta muddada-dheer:
Ma jiraan talooyin gaar ah oo ku saabsan sida ugu fiican ee guriga loogu hayo iyo meesha, dhulka hoostiisa ama dhulka hoostiisa (dhulka hoostiisa), qof kasta oo awood u leh inuu go'aansado naftiisa. Go'aaminta qodobada ilaalinta dheeraadka ah waa:
xaaladaha heerkulka qolka;
la'aanta helitaanka ogsajiinta xad-dhaafka ah;
Waxaa ka mid ah hababka loogu talagalay kaydinta, ninkii beerta oo idil wuu helayaa, kan ugu haboon iyo faa'iido leh. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad go'aansato goorta iyo sida loo nadiifiyo dalagga dalagga ee kaydinta.
Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan noocyada ku habboon ee dabacasaha iyo nolosha shelf halkan, iyo halkan waxaan kuu sheegay dhab ah taas oo kala duwan yihiin ku habboon kaydinta mudada dheer.
Goorma ayay ka fiicantahay in ay qodaan khudaarta?
Goosashada hore ee khudaarta ayaa yareysa tayada macaamilka ee asalka, oo aan u oggolaaneynin inay isku ururiyaan qadar ku filan oo sonkor ah. Muddo dheer oo aad ku jirtid beerta ayaa ku siinaysa fursad aad ku ururiso sonkorta tiro badan, taas oo ka dhigaysa khudradda soo jiidashada jilicsan.
Inta badan, wakhtiga goosashada waxay kuxirantahay wakhtiga iyo cimilada. Waqtiga firaaqada dalagyada xididada badanaa waxay ku qoran yihiin baakidhka miraha.. Way ka fiican tahay in la qodo khudaarta loogu talagalay kaydinta marka ay wanaagsan tahay sida ku qoran kalandarka Lunar. Kuwa ugu fiican ayaa ah maalmaha dayaxa, laakiin arrintan waa la dayacin karaa sababo cimilada oo ku habboon.
Goynta waa inay bilaabaan waqti markii ay 2-3 caleemaha hoose ee caleemaha u noqday huruud ah. Khudaarta caleemaha noocan oo kale ah waxay horey u leeyihiin guryaha macaamiisha. Beeraha waa laga saaraa ka hor bilawga barafka ugu horreeya (barafka, ma noqon doono mid ku haboon kaydinta), karootada si ammaan ah ayey uga tagi kartaa beerta ilaa barafka ugu horeeya (xididdada la qaboojiyo waxaa lagu kaydiyaa si ka fiican). Xilliga dayrta roobka, waxaa wanaagsan in la goosto dalagga hore, sida dalagyada xididada la quudiyo qoyaanka ayaa si liidata loo ilaalin doonaa illaa guga oo weyna u badan tahay.
MUHIIM: Waxaad karisaa karootada ka dib markii uu baraf ugu horeysay, iyo xididdo waa in laga saaro iyaga ka hor! Xiddo barafaysan ayaa si dhakhso ah u bilaabma kallana.
Waad ogaan kartaa goorta laga soo saaro dabacasaha beerta meesha lagu kaydinayo.
Daawo fiidiyo ku saabsan karootada goosashada iyo xididdo:
Hababka soo ururinta
Qaar ka mid ah xididdada ka soo baxa dhulka, qof ayaa ku xoqaya qashinka, qof ayaa qaadaya majarafad. Sidee u saxdaa? Ka hor intaadan sariirta lahayn oo aan khudradda ka dhergin.
Waxaa ugu wanaagsan in la yareeyo fowdo xayawaan, taageeraya xididka dabada. Goobuhu waa in si adag loo dhigaa meel aan ka fogayn 5 cm oo ka xigta safka. Tani waxay kaa caawineysaa in aad iska ilaaliso microtraumas, maxaa yeelay fureka keydinta wanaagsan waa maqaarka cufan. Sidaa darteed, si ay u garaacaan xididada midba midka kale si ay u ruxaan dhulka sidoo kale laguma talinayo.
Ka saar carrada xad-dhaafka ah xididka si wanaagsan u leh gacmaha gacmaha. Markaas waxaad u baahan tahay in la gooyo dushooda, waa in la gooyaa, ma in la jebiyo, ka tago dusha 1-1.5 cm, ka tago si ay u qalalaan dhowr saacadood. Gooyo caleenta waa in si dhakhso ah loo sameeyaa, maaddaama ay taasi ilaalinayso nafaqooyinka. Ka dibna kala sooc midhaha, ka saar khudaarta caleenta ah oo la burburiyo si looga fogaado kallana.
Qaar ka mid ah beeralaydu waxay ku talinayaan habkan jarida dufanka dabacasaha - jarista 0.5-1 cm ee sare ee xididka. Haddii habkan oo kale loo isticmaalo, ka dibna waa lagama maarmaan in la haysto khudaarta mudo ka hor inta aan la dhigin meesha lagu keydiyo - ilaa laga gooyo qaybta sare ee la daboolay qolof, haddii kale miro ayaa kareemaya wakhti gaaban. Xilliga roobka waxaa laga yaabaa inay qaadato dhowr maalmood si ay u qalalaan barnka, xitaa hal usbuuc.
Khudaarta cagaaran waa in aan la dhaqin ka hor inta aan la kaydin.! Xididdada la dhaqay iyo dabacasaha waxaa lagu kaydin karaa qaybta khudradda ee qaboojiyaha ee bac caawa ah hal bil.
Shuruudaha kaydinta dalagyo xidid
Heerkulka qolka, xididdo iyo karootada ayaa lagu kaydiyaa wax ka badan todobaad.
Bacaha caag ah ee qaboojiyaha - 1-2 bilood.
Karkari qaboojiyaha - hal bil.
Maqsin ee sanduuqa la xiray - 5-8 bilood.
Maqsin ee balka bacriminta ama qolof dhoobo ah - ilaa goynta xigta.
Maqsin ee ciidda - 6-8 bilood.
On beerta - ilaa goosashada cusub.
Halkee iyo maxaad ku ilaalin kartaa kobcintooda guriga?
Waxaad ku kaydin kartaa guriga (aqalka), labadaba balcoon-balaaran, maqaasiinka (qolka hoose), iyo beerta. Laakiin meesha ugu fiican ee lagu kaydiyo khudaarta waa shaki la'aan Maqsin.. Mar walba waa madow, oo leh heerkul joogto ah iyo qoyaan.
Diyaarso maqaasiinka hore. Soo saar, haddii ay lagama maarmaan noqoto - qalaji, ka dawee fungus, hubi joogitaanka godadka ka soo jeeda jiirka. Si loo yareeyo qoyaanka, waxaad sanduuqyada ku dhejin kartaa cusbo ama dhuxul ku yaal geesaha miiska. Haddaad derbiyada hoose ee dhismada ku dhejiso, waxaad ku dili kartaa laba shimbir oo hal dhagax ah: lime iyo jeermis, iyo samee hawada hawada.
TALO: Sidaa daraadeed jeexjeexayaashu ma dhicin, waxaad u isticmaali kartaa dabinka qashinka, cabsida ama qolka ku daaweyn kara hab gaar ah.
Waa maxay heerkulka iyo huurka?
Heerka u dhow eber, dheef-shiid kiimikaadku si dhakhso ah ayuu u hooseeyaa, taas oo gacan ka geysaneysa nabadgelyo weyn oo ah dalagyada xididka ah. Waxay leeyihiin waqtiyo nasasho. Heerkulka kaydinta ee dabacasaha iyo xididdo waa in aanay ka badnaan 10 digrii, sababtoo ah xataa xitaa +5 digrii, burooyinkeeda waa la jabin karaa, oo aan si buuxda looga saari karin.
Haddii qoyaanku hoos u dhaco, waxay ku hanjabtaa cidhbida dalagyada xididka ah, haddii ay sarreeyso, waa wax qallafsan. Sidaa darteed, qoyaanka waa in lagu hayaa qiyaastii 85 - 90%.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan heerkulka looga baahan yahay kaydinta waxaa laga heli karaa maqaalkan.
Beetjum waa dalagga aasaasiga ah ee digaaga. Sidaa darteed, xeerarka kaydinta soo socda waa in la fiiriyaa:
Si aad u seexatid tuubooyinka ama sanduuqyada, heerkulku wuxuu kudhowaad yahay 3 digrii, waxay si fiican ugu jiifaan jiilaalka oo dhan.
Waxaa si fiican loo kaydiyaa on maqaar baradho, kaas oo la wadaago iyada oo xad-dhaaf ah qoyaan.
Sanduuq aan lahayn godad, ku rusheeyeen ciid qoyan ee garabka.
In bacaha bacaha of 15-20 kg.
In beerta ee gunta yar. Si taas loo sameeyo, qodo daloolka 40 cm oo qoto dheer, dalagyo xidid ah ayaa lagu meeleeyaa qaabka prism-ga (sare-u-qaadidda 1-1.3 m), daboolay lakab qaro oo caws ah sidaa darteed qoorta waa 2 m sare, daboolay dhulka oo la daboolay barafka xilliga jiilaalka. Ka hor inta aanad dhicin, waa in la daaweeyo budada duurjoogta ah (200 g oo ah naas-nuujin 10kg oo ah xididdo).
Karootada way adagtahay in ay ku hayaan xaalad sare sababtoo ah waxay leeyihiin maqaar khafiif ah, taas oo si xun u haysata qoyaanka, xididdada si deg deg ah u fadhiiso oo qalalaan. Bacaha Bacda oo leh karti 20-30 kg waxay kaa caawineysaa inaad ilaaliso qoyaanka lagama maarmaanka ah. Dalagyada rootiga waxay ku seexdaan 2/3 iyaga oo ku rusheeyey balka sare, ma aha lagama maarmaan in la xiro bacaha si aysan u kicin.
Carrot "shaati dhoobo" ayaa sidoo kale si fiican u hagaagaya - wadahadal dhoobo ayaa la sameeyaa (dhoobo waxaa la badhxay biyo badhkii), waxaan ka dhajino karootada buudhigan iyo qalajin. Shirkan oo kale, dabacasaha ayaa haya si fiican u roonaanta oo aan ka sii darin.
DAREEN: Haddii xilliga goosashada ay jiraan dalagyo badan oo la burburiyay ama dhaawacmay, markaa dib ayaa loo isticmaali karaa oo loo kaydin karaa kaydka hore ee foomka loo marayo.
Sidee loo badbaadiyaa jiilaalka?
Karootada waxaa lagu kaydin karaa siyaabo badan.:
qalajinta dabacasaha guriga;
Kuwani waa hababka xoogga shaqada, laakiin waxaa loo isticmaalaa marar badan, maaddaama ay sii wadi doonaan dhamaan sifooyinka nafaqada ee khudaarta xilliga qaboobaha. Barafka dabacasaha ayaa sidoo kale loo isticmaalaa, marka khudaarta cagaaran ee la rusheeyaa huurka iyo ku rid barafeeyaha. Waxaad muujin kartaa khayaali oo jarjar gaabis ah. Sidoo kale jiilaalka qabow wuxuu ku faraxsan yahay iskudhaf khudradda khudradda ah (karootada, basbaaska macaan, digir cagaaran).
Ka fogow kaydinta dalagyada xididka iyo tufaaxa qol isku mid ah, tani waxay u oggolaanaysaa keydinta caleemaha xidid dheer.
Xingeyska iyo karootada beergooyska waa wax dhib badan, waana in loo soo dhawaadaa si masuuliyad leh.. Haddii aad sameyso wax walba waqtigeeda oo aad raacdo sharciyadan sahlan ee kaydinta, khudaarta beertaada waxay noqon doontaa mid cusub ilaa guga, iyo laga yaabee ilaa sanadka soo socda.